Mary Harper : Saaxiibkeeygii Maxamed ee Muqdisho lagu dilay - BBC News Somali
Mary Harper : Saaxiibkeeygii Maxamed ee Muqdisho lagu dilay
Image caption Maxamed Maxamuud Sheikh oo ku sugnaa goobtiisa ganacsi
Muqdisho oo ah caasimadda dalka Soomaaliya waxaa lagu qeexay inay tahay magaalada ugu halista badan caalamka. Laakiin dadka qaar oo halkaas ku sugan waxay isku dayayaan in ay nolosha dib u soo celiyaan. Tifaftiraha BBC ee Afrika Mary Harper oo si joogto ah u booqata Muqdisho ayaa baratay mid ka mid ah dadka ku nool magaalada - wiil si iskiis ah u abuurtay ganacsi oo lagu magacaabo Maxamed Maxamuud Sheekh. Ka dibna waxay heshay xaqiiqda.
Markii ugu dambeysay ee aan arko Maxamed, wuxuu i siiyay ubax. Wuxuu soo xushay midka ugu weyn uguna midabbada badan ee ku dhex jiray dukaankiisa ubaxyada lagu iibiyo. Albaabka xiga waxaa ku taalla goob ay yaallaan mashiinno koronto ku shaqeeya oo dharka lagu dhaqo - taasoo uu isla isaga leeyahay.
In aan soo leexdo si aan u arko Maxamed waxay mar walba ahayd mid ka mid ah waxyaabaha aan jeclahay marki aan booqdo Muqdisho. Halka ay warbaahinta caalamka ka hadlaan gaajada, burcad badeedda iyo qaraxyada is miidaaminta ah, isugu wuxuu si deggan oo go'aan leh u watay noloshiisa, isagoo dalkiisa ugu soo laabtay in uu sameeyo adeeg ay dad fara badan u arkaan in uu yahay wax lagu caajisayo.
Ganacsiyo fara badan oo si geesinnimo leh loo aasaasay ayaa jiraa, laga billaabo ninka dhallinyarada ah ee mootada ku wareejiya cuntada bisil ilaa gabadha go'aansatay inay noqoto makaaniga baabuurta.
Mar walba waxaan halkaas tagi jiray anigoo ay ila socdaan ilaalo xoog badan - ugu yaraan lix waarddiye oo ku jira hal gaari iyo kuwo kale oo ku jira baabuur kale.
Waxaa aad u fiican in aad noqotid qof aan la qiyaasi karin - dadku waxay dhahaan Taleefannada waa la dhageystaa waxaana meel kasta joogaa sirddoon.
La dagaalanka musuqa Soomaaliya oo sii karaar qaadanaya
Hadda Maxamed uma suurta galeyso in uu rumeeyo riyooyinkii kale ee uu ii sheegay in uu lahaa - ee ahaa in uu furo goob gym ah, xarun ay carruurta ku ciyaaraan iyo in uu ubaxyada uu iibiyo oo idil ku abuuri doono Afgooye, oo aan ka fogeyn Muqdisho. Wuxuu ku riyoonayay in uu cagaar ka dhigo magaalada wuxuu horayba u keenay geedo ubaxyo ah oo uu damcsanaa in uu halkaas ku tallaalo.
Image caption Mary Harper iyo ganacsadihii la dilay Maxamed Maxamuud
Saddex maalmood ka dib geeridiisa, dibadbax dhif iyo naadir ah ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Dad dhallinyaro ah oo madaxa ku soo xirtay tabeebeyaal cad cad ayaa isugu soo baxay waddooyinka iyagoo ku dhawaaqaya hal ku dhigyo ay ka mid tahay "Jooji dilka dhallinyarada". Waxa y is weydiinayeen sababta loo dilay dadka sida Maxamed oo kale ah, islamarkaasna aysan u jirin cid loo soo qabtay falkaas.
Waxaan u maleynayay in arrintaan ay noqoneyso sheeko aad u weyn - oo ay u noqoneyso dadka sida Maxamed oo kale ah oo iyagoo dibadda ku noolaa u soo noqonaya si ay qarankooda dib ugu dhisaan.
Lahaanshaha sawirka TedX
Image caption Maxamed Maxamuud Sheeikh
Hooyadiis waxay su'aalo iska weydiineysaa oo ay ku jahwareersantahay qalalaasaha ka jira Soomaaliya. Waxay la yaabbantahay cidda wax dileyso iyo cidda la dilayo. Dadku waxay badanaa eedda dusha uga tuuraan Al-shabab oo muddo ka badan 10 sano falal amni darro ka geysaneysay Soomaaliya iyo meelo kaleba. Balse cidda wax dileysa kooxdaas kaliya ma aha.
Waxaa si kama' ah toogasho ugu dilay ilaalada xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliya. Dhallinyaro suxufiyiin ah ayaa loo dilaa si joogto ah.
Waxaan mar walba ka fikiraa wiilkaas - saaxiibtinnimadeenni, soo dhaweyntiisi fiicneyd iyo sidii cajiibka ahayd ee uu hamiga ugu hayay sameynta nolol wanaagsan.
Image caption Xeebta magaalada Muqdishu